Hegemon: chishandiso modular sisitimu uye kutarisisa Hardware | Linux Vakapindwa muropa
Zvinogoneka kuti mushure mekuverenga zita rauri kufunga nezvaro zvishandiso senge hardinfo, imwe nzira yakanaka kune Windows zvirongwa zvakaita seAIDA64 iyo inokutendera iwe kuti utarise zvakajeka zvishandiso zvehardware neruzivo rwehurongwa zvakare. Kana pamwe urikufunga nezvevamwe vakaita se htop, pamusoro, iostat, iotop, netstat, nezvimwewo, kuongorora maitiro uye rumwe ruzivo rweI / O, netiweki, nezvimwe. Asi isu hatisi kuzonyatsotaura nezvavo, asi nezve imwe nzira.
Ichi chishandiso chitsva, chitsva chirongwa chinonzi Hegemon izvo zvine zvakawanda zveramangwana zvirongwa zvekuvandudza chishandiso ichi chekutarisa system uye Hardware yemidziyo, uye ndiani anoziva kana vachizviita nemazvo zvekuti chichava de facto chishandiso cheizvi zvezuva nezuva mabasa. Parizvino, ine rutsigiro rweLinux, kunyangwe ivo vachironga kuitangisa kune mamwe maUnixes zvakare ...
Vagadziri vayo vakanyora chishandiso kuve modular uye kushandisa iyo Ngura mutauro. Parizvino, unogona kuongorora CPU chiitiko, ndangariro mukushandisa, tembiricha, uye kumhanya kwe fan. Uye zvakare, inopa graphical dhata neruzivo, inobvumidza kugadzirisa zvikamu, nezvimwe. Asi zvakarongerwa kuwedzera zvakare kuongorora kwe disks, network, GPU, nezvimwe, pamwe nekusanganisa rutsigiro rwekudzora mbeva.
Kana iwe uchida kuiisa, unofanirwa gadza Ngura, uye mamwe mapakeji ema sensors auchasangana nawo. Maitiro acho anotevera eDEB-based distros, nekuti ndiwo akajairika (kune mamwe ese akafanana, achingoshandisa iwo anoenderana mapakeji mamaneja):
Uye nemirairo yekupedzisira iyoyo, kunyorera kunovhurwa uye tichaona mamiriro ayo iyo yatinogona kudyidzana nayo zvine simba. Ndinovimba unoifarira, uye ndinotarisira kuti vanogadzira havazo nyadzise nekuenderera mberi sezvavanenge varonga kuti vaone zvese zvinoshanda, uye kuti zvirege kuwira mukukanganwa semamwe mapurojekiti aiita kunge anovimbisa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Hegemon: modular chishandiso cheiyo system uye Hardware yekutarisa
Android-x86 chirongwa chakaburitsa yekutanga yakagadzikana vhezheni ye Android 8.1